Tuulada Mayla oo Shirkada Biyaha NUWACO ay ka fulinayso Ceel Biyood – SBC
Tuulada Mayla oo Shirkada Biyaha NUWACO ay ka fulinayso Ceel Biyood
Posted by Webmaster on September 21, 2012 Comments
Tuulada Mayla oo Garowe u jirta qiyaas ahaan 105 Km ayaa waxaa Laga hirgalinyaa ceel biyood dadka degaankaasi ay aad ugu baahi qabeen kadib markii malinmadii shalay ay booqasho ku tageen Masuliyiin ka socday Ha’yado u badnaa kuwa Biyahaa oo ay ka mid ahayeen PSAWAYN , NUWACO, iyo PAH oo intuba ku hawlan sidii ay ceelal biyoodo uga hirgalin lahayeen degamada u bahan si xiliyada roobabku marka ay daahan ay uga faa’idaystaan.
Inta aan loo guda galin goobta ceelka laga qodayo ama la dhagax dhigayo ayaa masuuliyiintii waxaa ay kulamo la qateen dadka degaanka o ay ka waraysteen dhanka biyaha helidooda iyo sida ay ugu bahan yihiin biyo aan wasakh ahayn oo nadiifa, intaas ka dibna waxaa ay soo jeediyen Masuliyintii in ay ka fulinayaan degaanka Mayla ceel biyood, si bahiyaha ay soo gudbiyeen dadku uu uga haqab tiro dadka degaanka.
Agasimaha Ha’yadda PSAWAYN C/raxaman C/shakur ayaa dadka uga mahad celiyay soo dhawaynta iyo warbixinada ay ka siiyeen baahiyaha ay ka qabeen dhanka biyaa madama ay halkaasi ka ag dhow yihiin xoolo dhaqato badan isagoo u shegay dadka in loo bahan yahay in ay ilaashadaan ceelkan dhawaan lo qodi dono , waxaana uu ku amanay Shirkada Biyaha ee NUWACO oo fadhigedu yahay Garowe biyahana siisa Magalada in ay gacan ka siiyaan fulinta Ceelka.
Bashir Xaashi Bootan oo ka mida odayaasha degaanka ayaa qiray in ay dadku ay ku nool yihiin biyo balse loo bahan yahay in laga war hayo
ceelkaan madama ay goobta laga qodayo ay isugu imanayaan dad badan oo u bahan biyo si uusan u istaagin, waxaana uu balan qaday dhulka laga qodayo ceelka oo dar ilahay ula baxay si bulshada loogu faa’iideeyo.
Gudoomiyaha shirkada NUWACO C/samad Islan Maxamed oo isna hadlay ayaa sheegay in la wada og yahay nolasha dadka iyo xooluhuuba ay ku xiran tahay biyaha loona bahan yahay in laga wada shaqeeyo dadalada ay wadaan Shirkada Biyaha ee Nuwaco oo ay la wadaan ha’yadaha kale isagoo dadkana ku bogaadiyey sida ay diyar u ugu yihiin hormarinta biyaha.
Madaxa Xafiiska Ha’yada PAH Alskendaro oo iyaduna so jeedisay ka wada qaybqadashada barnaamijkan biyaha lagu hoarmarinayo waxaana ay aad ugu mahad celisay dadka degaanka oo diyaarka u ah in laga qodo ceel biyod, lakin waxaa ay intaasi ku dartay in laga faa’idayso oo inta la qodo hadana markiiba uu jabo oo dadka biyo la’aan ay ku dhacday waxaana ay kula dardaarmatay in ay ka faa’iidaystan oo bulshada kalena u ilaliyaan dadka deeganka.
Cabdi Ibarahim waxaa ku xigeenka Ha’yada biyaha ee NUWACO oo gabo gabadii ka hadlay aya shegay in ay wadaan dadaalo badan oo ay ku doonayaan in ay ku hormariyaan biyaha iyo sidi dadka loo garsiin laha ceel biyoodyo.